कोरोना खोप विरुद्ध आज दाङमा २०८ जनालाई लगाइयो – Sidha Patra
कोरोना खोप विरुद्ध आज दाङमा २०८ जनालाई लगाइयो
Sidha Patra बुधबार, माघ १४, २०७७
दाङ । दाङ जिल्लामा कोरोना विरुद्ध खोप बुधबार विभिन्न तह र तप्कामा रहनु भएका २०८ जनालाई लगाईएको छ ।
पहिलो चरणमा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मी,राष्ट्रसेवकलगायतलाई पहिलो चरणको खोप दिईएको हो । राप्ती स्वासथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकसय २० र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ८८ जनालाई कोरोना खोप प्रदान गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड–१९ फोकल पर्सन कमल चन्दले बताउनु भयो ।
अहिले घोराही र तुलसीपुरबाट खोप प्रदान गरिएको भएपनि केही समयपछि लमहीमा पनि खोप प्रदान गरिने उहाँको भनाई छ । दाङमा ६ हजार डोज खोप आएको चन्दको भनाई रहेको छ । जिल्लामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. सागर पन्थी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले खोप लगाएर उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
दाङमा १० दिनसम्म खोप संचालन रहने छ । अन्य पालिकाहरुमा पनि खोप सेवा संचालन हुने छ । एक व्यक्तिलाई दुई पटक खोप दिईने भएकाले २८ दिन पछि पुनः दोस्रो चरणको खोप दिईने दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताउनु भएको छ । साथै दाङमा पहिलो चरणमा तीन हजार बढीलाई कोरोना खोप लगाइने उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरुले खोप लगाएको चार हप्ता पछि पुनः दोस्रो चरणको खोेप लगाउन पर्ने हुन्छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई १० लाख कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिएको हो । खोप लगाउन पाउँदा आफूहरु खुसी भएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका फार्मेसी प्रमुख सुलभ अधिकारीले बताउनु भएको हो ।